Ihe ị ga-eme na San Francisco | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, San Francisco
United States na-enye anyị akwụkwọ ozi nke obodo na obodo ya mgbe niile. Ọ na-eme ya site na fim na usoro telivishọn ma ruo ugbu a, ọ bụ ezie na anyị agatụbeghị ebe ahụ, anyị maara ihe gbasara New York, Chicago, Boston, Miami ma ọ bụ San Francisco. Nke ahụ bụ nnukwu ike ụlọ ọrụ ọdịbendị ya.
Taa, anyị ga-elekwasị anya na San Francisco, obodo nwere ike ịla n'iyi mgbe ọ bụla ala ọma jijiji, mana ọ ka dị, na-eche anyị. You na-amaja ije na mara ihe kacha mma na San Francisco? Ọfọn, tupu ị kwụsị ịgụ ihe niile ị nwere ike ime ebe ahụ.
2 Akwa Ọdọda Ọha
3 Agwaetiti Alcatraz
4 Streetcars na cableways na San Francisco
5 nnukwu ọnụ ụlọ obodo
6 Njegharị na San Francisco
Ọ bụ ógbè na obodo na obi ọdịbendị na ego nke ugwu etiti California. Ndị Spain hiwere ya na 1776, na Mission San Francisco de Asís ya mere aha. O toro aka na nrigbu nke ọla edo na narị afọ nke XNUMX na ọ bụ ezie ọkụ na-ekpo ọkụ, n'aka nke ya site na ala ọma jijiji, fọrọ nke nta ka ọ kpochapụ ya na map ahụ, a mụrụ ya site na ntụ.
Okporo ámá ndị na-arịgo ma na-eme ka onye ọ bụla nwee anyaụfụ, trams, ụlọ ndị Victoria, ụlọ Chinatown na-emesapụ aka na akwa mmiri a ma ama so na ya. Isi njem nlegharị anya. Ka anyị lee ụfọdụ, ndị ị na-agaghị atụ uche.
Akwa Ọdọda Ọha
Ọ bụ akwa nkwusioru gafee Okporo thezọ Goldenmá Golden, ọwa mmiri nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita atọ n'ogologo nke na-ejikọ ọnụ mmiri nke obodo ahụ na Oké Osimiri Pasifik. Tupu e wuo ya, ọrụ ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ oge niile mana ọ doro anya na mkpa maka mmiri ga-adị mkpa. Ọgba aghara nke '30 gbaghaara owuwu ya mana ọ malitere na 1933 wee kwụsị na 1937.
.Nnɛ ị nwere ike ịga mkpagharị ma ọ bụ ije ije dị mfe ma ọ bụ gbaa ịnyịnya ígwè ma ọ bụ gaa njem. O nwere ebe nleta nke ya nwere ozi banyere akụkọ ihe mere eme na ire ahia ncheta. Ọfịs a na-emeghe site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere isii nke mgbede ma na-enwekarị ihe ngosi mmekọrịta na mpụga. Ugboro abụọ n'izu, enwere njem nlegharị anya n'efu, Tọzdee na Sọnde.
Na nsọtụ abụọ nke akwa ahụ enwere ebe ntụrụndụ nwere nnukwu echiche ma ị nwere ike ịnwe kọfị na Round House Café ma ọ bụ Bridge Café nke na-emeghe n'otu oge ahụ dị ka ebe ndị ọbịa. Anaghị agbazinye igwe kwụ otu ebe na akwa ahụ, yabụ ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịga okirikiri, mgbe ahụ ị ga-akwụ ụgwọ ya tupu ị gawa. Rụba nke ahụ ama anabataghị igwe eletrik na ọgba tum tum, ọ bụghị skate ma ọ bụ skate.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ji ụkwụ aga, ị nwere ike ịbanye n'okporo mmiri kwa ụbọchị site n'okporo ụzọ East si 5 ụtụtụ ruo 6:30 elekere. Ọ bụrụ n’ịgba igwe kwụ otu ebe ịnwere ike ịbanye ebe a ma ọ bụ site n’ọnụ ụzọ ọdịda anyanwụ
Ọ bụ agwaetiti dị na San Francisco Bay ihe dị ka kilomita abụọ site n'ụsọ oké osimiri. Ọ bụ obere ma nnọọ ama n'ihi na Mkpọrọ Alcatraz. Ọ bụ ụlọ mkpọrọ gọọmenti etiti ma rụọ ọrụ n'etiti 934 na 1963. Aha ya dabere n'echiche bụ na ọ gaghị ekwe omume ịgbanahụ ya, ọ bụ ezie na ihe nkiri Clint Eastwood na-ekwu banyere ezigbo ụzọ mgbapụ nke mere na 1962.
N'etiti ndị mkpọrọ ya a ma ama, ọ nweghị ihe na-erughị Al Capone, ya mere n'agbata akụkọ ihe mere eme ya na fim ahụ, ọ ghọwo nnukwu ebe njem nleta. Tiketi niile jikọtara n'ihi na ha gụnyere njem ụgbọ mmiri na njem nlegharị anya dị n'ọtụtụ asụsụ. Enwere ike ịzụta tiketi n'ịntanetị, na mmadụ ma ọ bụ site na ekwentị.
Bụ Cbọchị njem nke Alcatraz na Njem Abalị Alcatraz. Nke mbụ dị ihe dị ka awa abụọ na ọkara ma ịnwere ike ịkwụ ụgwọ ya ruo ụbọchị 90 tupu oge. Ọ gụnyere njem okirikiri site n'ụgbọ mmiri, nnweta, njem nkeji iri anọ na ise, vidiyo nghazi na ntuziaka pụrụ iche. Ọnụ $ 45 kwa okenye. Otu ihe ahụ na-aga maka njem nke abụọ.
Streetcars na cableways na San Francisco
Lee mpempe akwụkwọ ozi! Streetgbọ okporo ámá ndị a na-aga na Chinatown na Wharf Fisherman, n'etiti agbata ndị ọzọ. The tram ọkwọ ụgbọala na-anabata ego na tiketi ahụ na-efu $ 5 maka okenye. E nwere otu ụbọchị gafere $ 13, ụbọchị atọ gafere maka 20, na ụbọchị asaa gafere $ 26.
I nwekwara ike zụta Fast Pass na-efu $ 60 kwa okenye ma na-enye ohere iji trams, eriri USB na bọs na-akparaghị ókè ruo otu ọnwa zuru ezu.
Na nkwụsị ndị ahụ enwere ihe ịrịba ama nke na-agwa gị aha nke ụzọ, adreesị, njedebe ikpeazụ, oge na nọmba ekwentị ịmata ụzọ, usoro na ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ tram ma ọ bụ cableway jupụtara na ndị mmadụ ma na mpụga ịlesụ na-efu, ọ bụ ihe nkịtị njem nghọta. Nsogbu adịghị! Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na isiokwu ị nwere ike ịga na Museumlọ ihe nkiri Cableway.
Ọ bụ ụlọ na mepere na 1915 mgbe ebibiri nke mbụ na ala ọma jijiji nke 1906. Ọ dị na Mpaghara Civic ma na-eleta ya bụ n'efu. Ọ bụ ụlọ mara mma ma buru oke ibu nke nwere blọk abụọ ma mara ya dome, a ọlaedo dome.
N'okpuru dome a, nke bụkwa ọla edo n'ihi na ọ nwere ọla edo dị ọcha, enwere steepụ mabul nke mara mma. Ọ nwere steepụ iri anọ na abụọ wee gbagoro n'okpukpu nke abụọ. N'elu steepụ ahụ, n'okpuru dome, bụ ebe di na nwunye na-ese foto agbamakwụkwọ ha. Dịka ọmụmaatụ, e sere foto a ebe a Marilyn Monroe na Joe DiMagio.
Ala nke Halllọ Nzukọ Obodo dịkwa mma, nke nwere ọmarịcha pink na-adọrọ adọrọ. Hụ ya site na ụlọ nke abụọ kachasị mma n'ihi na enwere ekele maka imewe ahụ. N'elu ala nke abụọ a bụ harvey mmiri ara ehi akpụrụ akpụ, na nso nzọụkwụ. Mmiri ara ehi bụ nwoke idina ụdị onwe mbụ iji jide ọfịs ọhaneze n'obodo ahụ ma Sean Penn gosipụtara akụkọ ya nke ọma.
Na ije ị nwekwara ike ịga leta a Obere ihe ngosi nka na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ahụ na ụfọdụ ihe ngosi na ala mbụ. Ọbịbịa ahụ bụ nke gị site na Mọnde ruo Fraịdee site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere itoolu nke abalị. Ọ bụrụ na ị na-ebu ọnụ na ọkara otu awa ị gwụchaa ma ị nwere ike jiri nwayọ na-eje ije ruo awa abụọ.
Njegharị na San Francisco
Agencieslọ ọrụ ndị njem nleta na obodo ahụ na-enye ọtụtụ njegharị. Nwere ike ịdebanye aha maka nke dị na Mkpọrọ Alcatraz, n'ụzọ doro anya, ma ọ bụ lekwasị anya na ndị na-ewere ọnọdụ n'etiti:
Akwụkwọ Ọha Ọha; Njegharị ndị a gụnyekwara Halllọ Nzukọ Obodo na agbata obi. Ọ na-eme na Tuesday na Tọzdee na 11 nke ụtụtụ. Ha na-ewe otu awa na ọkara.
Njegharị Halllọ Nzukọ Obodo: kwa ụbọchị, site na San Francisco Art Commission. Ọ na-ewe nkeji iri anọ na ise ọpụpụ n'elekere iri nke ụtụtụ, iri na abụọ na abụọ elekere. Ha na-ebido na City Hall Docent Tour Kiok.
SF nkiri Ntugharị: Echiche bụ ịmata ebe ebe nkiri dị ka Milk, A View to Kill ma ọ bụ Indiana Jones, dịka ọmụmaatụ.
Iwuli elu On Hop Gbanyụọ Bus: obodo ahụ na-enyekwa njegharị ndị a na-enwe mmekọrịta enyi na enyi mgbe niile. Ọ na-akwụsị na Civic Center agbata obi na Asia Art Museum, otu n'ime ndị kasị mma na mba.
Ndị a na ebe nkiri anyị lekwasị na obodo center. O doro anya na enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme n'ihi nleta ndị a na-ahapụ gị ọtụtụ oge n'efu. Ije ije na nri ehihie gụnyere na Chinatown enweghị ike ịchefu ya, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ ịgagharị n'ubi vaịn ndị dị na mpụga. Ihe niile dabere na oge nke afọ ị na-eleta, mana na-ekwu okwu ebe a ihu igwe dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » San Francisco » Ihe ị ga-eme na San Francisco
Obodo 5 Europe maka ezumike